Dia inona taratasy fanamarinana ratsy? | Malagasy kasahorow
Alarobia. Jiona 23, 2021
Anokwale by GhanaThink, Alakamisy. Septambra 19, 2019 - Alakamisy. Jiona 17, 2021. 𓀠 474
Mitombo taratasy fanamarinana ratsy.
Mividy taratasy fanamarinana olona.
Manome taratasy fanamarinana orinasa vaovao.
Manome fanamarinana ny sasany orinasa vaovao.
Mtadiavo taratasy fanamarinana ratsy ianao.
Dia fahadisoana ny adiresy ny ny orinasa.
Mfarany miaraka amin' 'ac', 'uk' ny takelaka, na 'edu'.
Manangona vola izy ireo.
Dia fahadisoana ery.
National accreditation board, manaiky orinasa sy fandaharan'asa Ghana.
Mkarohy, tadiavina orinasa takelaka ny iray ianao mahay, "https://nab.gov.gh".
Mahay refeso ny taratasy fanamarinana nao NAB.